बालिका लागि ज्याकेट - कुनै पनि विस्तार मा एक उज्ज्वल र स्टाइलिश outfit
जवान सौन्दर्य रूपमा उनको आमा वा बहिनी रूपमा स्टाइलिश देख्यो गर्न, जीन्स र टी-शर्ट भन्दा लुगा केही थप रोचक र जीवन्त उदाहरणहरु संग सानो राजकुमारी दराज भिन्न गर्नुपर्छ। विकल्पहरू को विशाल विविधता बीच बालिका लागि स्टाइलिश ज्याकेट विशेष ध्यान गर्नुपर्छ। उहाँले एक ज्याकेट आकार प्रतिनिधित्व तर बुना भइरहेको सहित धेरै फरक Tissues बनेको हुन सक्छ। आफ्नो राजकुमारी भीड देखि बाहिर खडा गर्न चाहन्छु र स्टाइलिश लुगा को उनको दराज लागि छनोट अप गर्नेहरूका लागि, यो ज्याकेट र यसको लाभ नियालेर लायक छ।
एक महिला को लागि लिपस्टिक जस्तै बालिका लागि ज्याकेट - बेबदल कुरा
जब एक युवा उमेर मा उचित सेक्स को मालिक हुनुहुन्छ - 3-6 वर्ष, आफ्नो व्यवहार, गतिविधि markedly ती पहिले नै आयोजित महिला फरक, र त्यो ठीक छ। सानो बालिका थप सक्रिय छन्, त्यसैले सधैं एक जटिल केश गरिरहेको, केही व्यायाम लागि वा स्कूल एक पोशाक र जूता लगाउन सहमत छैन। सँगै पूर्ण फिट गर्न जूता, केही, मूल सरल र उज्ज्वल ज्याकेट को छवि पूरक पर्याप्त पाउन। यो ज्याकेट सार्वभौमिक, यो सधैं एक विशेष शैली द्वारा सहज छ, यो पनि चिसो मौसममा आवश्यक गर्मी प्रदान गर्दछ र केटी सुन्दर हेर्न अनुमति दिन्छ, त्यो जिन्स र जूता छ भने पनि हुन्छ। यो औपचारिकता, उत्सव पोशाक पतला र टिप्पणीहरू शैली र विकेन्द्रहरु थप्न ठूलो मौका छ। वा, conversely, छवि विशेष, स्त्री र स्टाइलिश बनाउन।
के ज्याकेट जान्छ?
नै, यो टुक्रा दराज धेरै सुविधाजनक र व्यावहारिक छ। विशेष गरी आमाहरु त्यस्ता पोशाकहरू प्राथमिकता दिन, र सबै किनभने ज्याकेट सजिलै कपडे, स्कर्ट, र जिन्स र सुरुवाल संग संयुक्त छ। यो अवस्थामा मुख्य कुरा हो - यो आफ्नो शैली, रंग र कपडा छान्न सही छ। आज, बालिका लागि उपयुक्त ज्याकेट फेला पार्न - तपाईं खाता उमेर-सम्बन्धित परिवर्तनहरू मा (को जीव को छिटो वृद्धि) ले मात्र आवश्यक छैन किनभने, सजिलो छ, तर पनि कपडा संरचना उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने तथ्यलाई।
बुना भयो कपडा - न्यानो र सहज
यो ज्याकेट भन्दा सामान्यतः चिसो मौसममा प्रयोग गरिन्छ। सबैले पोशाक भन्दा आफूलाई लागि चुन ज्याकेट गर्नेछ: न्यानो लुगा को मुख्य तत्व वा सजिलै हटाउन सकिन्छ जुन छवि एउटा पूरक। एक आमा, हजुरआमा वा बहिनी जवान राजकुमारी लागि एक सुखद आश्चर्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने, यो एक ज्याकेट लायक बालिका को यार्न प्रयोग गरेर आफ्नै बनाउन को लागि, यो त गाह्रो छैन कि थप छ। आफ्नो हात सम्बन्धित ज्याकेट संयोजन, कपडे को एक किसिम हुन सक्छ - sarafan एक-लाइन (स्कर्ट-सूर्य) र यति मा कपडे।
आफ्नो हातले ज्याकेट - उच्च गुणवत्ता, न्यानो र सुन्दर
आफ्नो हात न्यानो र सुन्दर ज्याकेट बनाउन - यो मात्र हो स्टाइलिश, तर किनभने यो यार्न को मात्र केही बल र निःशुल्क समय एक जोडी घण्टा (यदि उच्च गति बुनाई) आवश्यक हुनेछ पनि लाभप्रद छ। बुना ज्याकेट बालिका यसको न्यानोपन र कोमलता द्वारा विशेषता छ। स्पर्श बुना भयो कपडा सधैं प्रसन्न छ, र यो पनि एउटा सानो बच्चाको ब्लाउज, प्यारा र अरू केही छ भने। तर गम्भीर विषयमा, त्यसपछि एक सुन्दर र मौलिक ज्याकेट बाँध गर्न, यो आवश्यक भविष्यमा उत्पादन को आकार निर्धारण गर्न सुरु गर्न छ भेट्नुपर्छ।
यसो गर्न, तपाईं एक मोडेल आफ्नो माप लिन आवश्यक र भविष्यमा उत्पादन को आकार संग तालिका आकार को एक किसिम मदत गर्नेछ। सिर्फ एक उपयुक्त आकार विकल्प फेला पार्न, र त्यसपछि मात्र, चयन गर्न उत्पादन को डिजाइन छनौट र यसको सिर्जना प्रक्रिया प्रविधी बुनाई, यार्न किन्न गरिनेछ।
त्यहाँ एक ठीक परिभाषित उत्पादन संरचना थियो र यार्न चयन भने, तपाईं प्रविधी बुनाई बालिका लागि यस्तो छोराछोरीको जैकेट मा टिप्न गर्न आवश्यक छ। यो बुना ज्याकेट, शैली र सौन्दर्य भविष्य ढाँचा निर्धारण गर्नेछ। यी प्रविधी मा एक विशेष, मौलिक भिन्नता छैन सँग, बुनाई प्रविधी वा हुक वा बुनाई सुई चयन गर्नुहोस्। एक सधैं अर्को बदलिएको गर्न सकिन्छ।
उदाहरणका लागि, एक बुनाई प्रविधी, कुनै पनि समयमा छनौट, तपाईं crochet सुरु, र विपरित गर्न सक्नुहुन्छ। यो एकदम divergent प्रविधी छ, र सबै भन्दा राम्रो एक, कारण छैन जो गर्छ अतिरिक्त कठिनाइ पाश र परिष्कृत सौंदर्य डिजाइन लागू गर्न सजिलो प्रयोग गर्नुहोस्। अक्सर, एक ज्याकेट बालिका लागि, हुक जडान, तल्लो घनत्व (गठन गर्दै कारण ठूलो slits बुनाई को एक विशेष प्रकार गर्न) छ। यो किनभने, कि मा ज्याकेट हावाको मौसम मा बाहिर जाने छैन, र मात्र घर भित्रका वा वर्ष को न्यानो मौसम मा लगाएका, प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अझै बच्चाहरु आमाबाबुले उज्ज्वल वस्त्र को एक किसिम तिनीहरूलाई पोशाक गर्न किन्न सक्छन्, साना छन्। तपाईं बालिका crochet लागि र जो रंग यार्न चयन गर्न थाहा छैन, त्यसपछि प्राथमिकता दिन एक ज्याकेट बुनना जाँदैछन् भने गुलाबी, बेज, पुदीना को नरम रंग, र हरियो छ। यी रंग सधैं बालिका लागि सान्दर्भिक र यसरी आफ्नो व्यावहारिक प्रयोग (सेतो यार्न संग तुलना) हुनेछ। तपाईं भविष्यमा उत्पादनहरु को योजना चयन गर्दा, विशेष ध्यान लम्बाइ भुक्तान गर्नुपर्छ। आज छोटो जैकेट सान्दर्भिक छैनन्, र कमर मा अन्त ती को राम्रो प्रयोग गर्नुहोस्। बालिका लागि योजनाहरु जैकेट नमुना रचना गर्न, सही लूपहरूको संख्या गणना गर्न अनुमति दिन्छ जो सबैभन्दा विस्तृत वर्णन, हो, र तपाईं किनारा उत्पादन को (को आस्तीन, क्षेत्र मा बटन मा) को व्यवस्था। एक crochet योजना खातामा विशेषताहरू वा उत्पादन विवरण एक नम्बर लिनुपर्छ छनौट गर्दा: यो pockets (आफ्नो उपस्थिति वा अनुपस्थितिले), कलर, बाहुला लम्बाइ (3/4, पूर्ण), बेल्ट को उपस्थिति छ। स्टाइलिस्ट बेल्ट प्रेम, तर बालिका 3-6 वर्ष को लागि चयन ज्याकेट, यो आवश्यक छ भने pojasochki देखि इन्कार गर्न। सानो Fashionista छैन साँच्चै आफ्नो outfit हेर्न चाहनुहुन्छ, त्यसैले यो वस्तु unleash भने, र ज्याकेट, विभिन्न शायद यो पनि लापरवाहीसंग हेर्न, र बेल्ट र कुनै एक पाऱ्यो सुधार गर्न। यसलाई देखि इन्कार, बरु कमर जोड हुनेछ जो, एक शैली रोज्नुहोस्।
ब्रा-ट्रांसफर्मर - हरेक Fashionista को सपना
गर्भवती महिलाका लागि Swimsuits। स्वास्थ्य लाभ संग बाँकी
इन्टरनेट-दोकान "Zapata": स्रोत समीक्षा
जूता "Reebok Iziton"। नवीनता फिटनेस को क्षेत्र मा
ब्रा अदृश्य अन्य मोडेल अधोवस्त्र
Malyshevoy को वजन विधि
को sacrum को भंग: निदान, उपचार, नतिजा। कसरी लामो sacrum को भंग निको पार्नुहुन्छ
स्तन रोग - यो के हो?
के चुरोट प्रतिस्थापन गर्न सक्छ? त्यहाँ एक तरिका हो।
कार "लन अर्को": मालिकको समीक्षा, परीक्षण ड्राइव, फोटो, इन्धन खपत र मूल्य
रूसी मौद्रिक प्रणाली
किन आतंकवाद विरुद्ध घर दिवस लडाई मनाउन?
अंधा कसरी धुन: शुद्धता को रहस्य
वाक्यांश को "Mene, Tekel, भाडा" को अर्थ के हो? रोमन: Olesya Nikolaeva "Mene, Tekel, भाडा"
जिम्मेवारी: भूमिकालाई र उद्देश्य
'Ranitidine' antiulcer दबाइ। सङ्केत गर्छ हालतमा
"द लिग सट्टेबाजी": समीक्षा। "द लिग सट्टेबाजी" - bookmaker